सप्तरीमा वर्षाले धानबालीमा क्षति, देखियो यस्तो कारुणिक दृश्य, हेर्नुहोस – Sandesh Press
सप्तरीमा वर्षाले धानबालीमा क्षति, देखियो यस्तो कारुणिक दृश्य, हेर्नुहोस
October 21, 2021 147
काठमाडौं । लगातारको वर्षाले सप्तरीका १८ पालिकाका धानबालीमा क्षति पु-याएको छ । काटेर खेतमै रहेका अवस्थामा धानबाली डुबानमा परेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् ।
छिन्नमस्ता गाउँपालिका–३ का किसान दीपेन्द्र यादवले खेतमा पानी जमेपछि काटेको धान डुबानमा परेकोे बताए । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका छिन्नमस्ता, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका सहित पश्चिमी भेगका बलान विहुल,राजगढ गाउँपालिका, बोदे बरसाइन, डाक्नेश्वरी नगरपालिका, र पूर्वी भेगका हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका क्षेत्रमा धानबालीलाई पानीले बढी असर पारेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार यसवर्ष जिल्लाको ६८ हजार हेक्टरमध्ये ६३ हजार हेक्टरमा धानबाली लगाइएकोे थियो । वर्षाले साथ दिँदा सतप्रतिशत रोपाइँ भएकाले केन्द्रले जिल्लामा धान उत्पादन बढ्ने अनुमान समेत गरेको थियो ।
आइतबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण उत्पादनमा करिब २० प्रतिशत क्षति पुग्ने जनाइएको छ । पाकेको धानबालीमा पानी जमेर नष्ट हुँदा किसान मर्कामा परेका छन् । ठूलो मिहिनेत र लगानी गरेको धानबाली भित्राउने बेलामा पानीमा डुबेर खेतमा धान झरेर टुसा उम्रिने भएपछि उनीहरु निरास भएका छन् ।
हावाहुरी र वर्षाको कारण खेतमा पाँजा लगाएको धानसमेत उठाउन नपाएको उनीहरुको दुखेसो छ । हनुमाननगर कङ्कालिनी–२ का किसान लाल माझीले थन्काउने बेलामा धाननष्ट हुँदा समस्या परेको बताए । उनले भने “खेतमा जम्मा भएको पानी सुक्दासम्म त धान झरेर उम्रिन्छ ।”काठमाडौं । लगातारको वर्षाले सप्तरीका १८ पालिकाका धानबालीमा क्षति पु-याएको छ । काटेर खेतमै रहेका अवस्थामा धानबाली डुबानमा परेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् ।
हावाहुरी र वर्षाको कारण खेतमा पाँजा लगाएको धानसमेत उठाउन नपाएको उनीहरुको दुखेसो छ । हनुमाननगर कङ्कालिनी–२ का किसान लाल माझीले थन्काउने बेलामा धाननष्ट हुँदा समस्या परेको बताए । उनले भने “खेतमा जम्मा भएको पानी सुक्दासम्म त धान झरेर उम्रिन्छ ।”
Prevजब पहिलो पटक आर्यनलाई भेट्न जेल पुगे शाहरुख खान, १८ मिनेट के गरे कुराकानी ?
Nextत्यसकै उपचार गर्ने संसारभर भाईरल झाँक्रीको २५ बर्षकै उमेरमा सर्पकै टोकाइबाट निधन
डाक्टर हुँ भन्दै उपचार गर्दा एक महिलाको मृत्यु, पछि पो खुल्यो यिनी त नक्कली डाक्टर रहेछन्
कबिताको आमाबुवाले नै यसो भने छोरीले लाको र खाको मा धेरै नै डा’हा गर्थी….( हेर्नुहोस भिडियो सहित )
पहाड र तराईका केही स्थानमा चट्याङ्ग र हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना